DAGAALKII UXUD [Qaybta::: 4aad]
Ku xiiirsan Qaybtii 3aad ee Uxud
Xaaladdu markii ay halkaas marayso oo ciidankii muslimiintu uu goobtii la wareegay, qaniimadii iyo xoolihii gaaladana ay ururinayaan, ayaa 50kii nin oo gumaadda ahaa, oo Rasuulku SCW sidii la ogaa ula dardaarmay, kuna adkeeyey in aysan meeshooda ka soo dhaqaaqin haddii ay muslimiinta guul helaan iyo haddii kaleba, ayaa markii ay arkeen in ciidankii muslimiintu guuleystey oo qaniimadii gaalada ururinayo waxaa qaarkood ka xoog badiyey adduunyo jaceyl, markaas ayey ku dheheen qaarkii kale "war qaniimada, qaniimada, raggeennii baa guuleystey ee maxaad sugeysaan?". Waxaa markaa la hadlay ninkii 50ka nin madaxda u ahaa Cabdullaahi binu Jubeyr, oo xusuusiyey dardaarankii Rasuulka SCW, kuna yiri "war ma hilmaanteen wuxuu Rasuulku SCW idin yiri?". Hase ahaatee, laab meeli u caddahay meeli ka madow'e, arrinkaaas waxba dheg uma aysan jalaq siin, waxaana yaacay 40 nin, goobtiina waxaa ku haray 10 nin oo uu ku jiro Cabdullaahi binu Jubeyr, oo iyagu amarkii Rasuulka SCW sidii uu ahaa u fuliyey. Waxaa markaa weerar ku soo qaaday Khaalid binu Waliid oo watey ciidankii fardooleyda gaalada, markaa ka horna ay saddex jeer oo hore waabiyeen. Wuxuu Khaalid laayay 10kii nin, markaas ayaa ciidankii gaalada oo awal jabay wuxuu ogaaday in xaaladdii is beddeshay, dib buuna u soo laabtay, calankoodii oo muddaba ciidda iska yaallayna waxaa qaadday haween la oran jirey Camra bintu Calqama, oo ka mid ahayd 15kii haween ee la socday ciidanka gaalada. Ciidankoodii oo dhan wuxuu ku soo ururay meeshii calankoodu ka muuqday, muslimiintiina hore iyo gadaal ayey ka hareereeyeen.
Ciidankii muslimiintu markii ay arrintaasi ku dhacday ayey wareereen oo meel looga yimid garan waayeen. Waxayna u qaybsameen wax buurtii fuula, wax carara oo magaaladii afka saara iyo wax ciidankii gaalada dhex gala oo kala garan waayey gaaladii iyo muslimiintii ilaa ay iyaga laftoodii is laayeen. Ninkii la oran jirey Xudeyfa binu Yamaam, ayaa arkay aabbihiis Yamaam oo muslimiinta ka mid ahaa oo muslimiin kale dileyso, markaasuu qayliyey oo yiri "addoomadii Ilaahayow waa aabbahay, aabbahay", hase yeeshee cidi ma aysan maqal, wayna ku sii wadeen ilaa ay ka dileen, markaas ayuu Xudeyfa yiri "Allaah ha idiin danbi dhaafo".
Waxay muslimiintii jahwareerkaas ku jiraanba, waxay arrintii sii kharaaratey markii ay maqleen qaylo oranaysa "Maxammed waa la diley", markaas ayaa niyad jab ku dhacay ilaa ay raggii qaarkood dagaalkii joojiyeen, ragna dhabarka sii duween. Allaahna isagoo ka hadlaya ragaas cararay ee dhabarka jeediyey waxa uu qur'aankiisa ku yiri:
Laakiin dad isku mid ma ahane, rag baa wacdaro muujiyey sida Anas binu Nadar oo soo maray rag meel iska jooga, markaas ayuu ku yiri "maxaad sugeysaan?", waxay dheheen "Rasuulkii SCW waa la diley", wuxuu yiri "maxaad nolol ku falaysaan gadaashiis? war soo baxa oo ku dhinta wuxuu Rasuulku SCW ku dhintay", wuuna sii dhaafay isagoo leh "Allahayow waxaan kaaga cudurdaaranayaa waxa ay sameeyeen kuwaan (muslimiinta), waxa aana kaaga beri noqonayaa waxa ay sameeyeen kuwaas (gaalada)". Wuxuu la kulmay Sacad binu Mucaad, markaas ayaa Sacad yiri "xaggee u socotaa?", wuxuu Anas yiri "jannada carafteedii ayaan Uxud sokedeeda ka helayaa", wuxuu Anas ciidankii gaalada ayuu ku dhex dhacay, aad ayuuna u dagaallamay ilaa uu aakhirkii ka shahiidey. Markii uu dagaalku dhammaadayna cid garata ayaa la waayey ilaa ay markii dambe walaashiis ku aqoonsatay farihiisii, waxaana jirkiisa ku yaalley dhowr iyo siddeetan nabar oo isugu jira waran, seef iyo fallaar. Waxaana sida la wariyo sababtiisa ku soo degtay aayadan:
((MU'MINIINTA WAXAA KA MID AH RAG KU RUN SHEEGAY WAXAY ALLE KULA BALLAMEEN, WAXAA KA MID AH MID GUTAY BALLANTII (SIDA ANAS), WAXAA KA MID AH MID SUGAYA MANA AYSAN BADALIN (GO'AANKODII)), (Suuratul-Axsaab 23).
Sidoo kale Thaabit binu Daxdaax wuxuu u dhawaaqay ansaar oo ku yiri "Ansaareey haddii Maxammed SCW la diley Allaah ayaa nool oo aan dhiman ee u dagaallama diintiinna Allena waa idiin gargaarayaaye". Koox Ansaar ah ayaa markaa isagii raacday oo la dagaal gashay ilaa isagii iyo iyagiiba la laayey. Sidoo kale nin Muhaajiriinta ka mid ahaa ayaa soo maray nin Ansaar ah oo dhiiggiisa ku dhexgalgalanaya oo naf yari ku jirto, markaas ayaa kii muhaajirka ahaa ku yiri "hebelow Maxammed SCW la diley waa gaarsiiyey (xaqii) ee u dagaallama diintiinna". Allena SW isagoo tilmaamaya dhaawaca muslimiinta soo gaaray iyo in uusan kaligood gaar ku ahayn, uuna doonayo rag shuhado ah oo jidkiisa ku dhinta, waxa uu qur'aankiisa ku yiri:
((HA DACIIFININA HANA MURUGOONINA IDINKAA SAREEYA HADAAD MU'MINIIN TIHIIN, HADDII DHAAWAC IDIN TAABTAY NIMANKABA (GAALADA QUREYSH) WAXAA TAABTAY DHAAWAC LA MID AH, WAANA SAAS MAALMUHU OO WAXAAN KU WAREEJINNAA DADKA DHEXDIISA, WAXAANA (AALLE SIDAA U YEELAY IN) UU OGAADO (MUUJIYO) KUWA MU'MINIINTA AH, IDINKANA YEESHO (QAARKIIN) SHUHADO, ALLENA MA JECLA DAALIMIINTA, IYO IN UU ALLE IMTIXAAMO KUWA MU'MINIINTA AH GAALADANA TIRTIRO)), (Suuratu Aali-Cimraan 139-141).
Sidoo kale Alle SW isagoo xusuusinaya mu'miniinta in Nabi Maxammed SCW yahay Rasuul ka mid ah Rusushii uuna dhimanayo sidii Rusushii ka horayseyba ay u dhinteen haddii uu dhintana aan loo baahnayn in la gaaloobo waxa uu qur'aankiisa ku yiri:
Dhinicii Rasuulka SCW waxaa ku haray 9 nin (7 Ansaar ah iyo 2 Muhaajiriin ah), waxaana isku hareereeyey fardooleydii ciidankii gaalada. Rasuulku SCW dagaalyahannimadiisii iyo geesinnimadiisii ayuu muujiyey, wuxuuna sameeyey, isagoo sidaa loo hareereeyey oo cadowgii gaaladu ku soo ururay, ayuu u dhawaaqay muslimiintii, isaga oo og in gaaladu hadalkiisa maqlayso inta aysan muslimiintu maqlin, wuxuuna yiri "addoomadii Allow kaalaya Rasuulkii Alle ayaan ahaye". Allena isagoo arintaa tilmaamaya waxa uu qur'aankiisa ku yiri:
Sidoo kale nin kale oo gaalada ka mid ahaa, lana oran jirey Cabdullaahi binu Shihaab Suhri, wuxuu isna Rasuulka SCW ka dhaawacay wejiga. Wiil reer Faaris ahaa oo la oran jirey Cabdullaahi ibnu Qum'a ayaa isna sidoo kale Rasuulka SCW seef daran qoorta uga dhuftay hase yeeshee Ilaahay oo ka badbaadiyey iyo Rasuulka SCW oo labo canbuur bireed iyo koofi bir ah qabay seeftaasi gudaha uma gudbin inkastoo Rasuulku SCW muddo bil ka badan uu ka sheegan jirey dhaawacaas. Sidoo kale ninkaasi wuxuu Rasuulka SCW ku dhuftay seef tii hore mid ka daran oo koofiyad bireeddii dhaaftay ilaa ay birihii Rasuulka SCW ka galeen madaxa, wuxuuna yiri markuu seeftaa Rasuulka SCW ku dhuftay "qaado in Qum'a ayaa ahe". Rasuulku SCW wuxuu ku yiri isago dhiigga sika tiray a "Alla ku hooji", dabadeedna waxaa ninkaas ku dhacay habaarkii Nabiga SCW oo si xun ayuu u dhintay. Rasuulku SCW sidoo kale wuxuu yiri "sidee u liibaanayaan dad dilaacshay wejigii nabigooda oo jebiyey foolashiisii isagoo xaga Alle ugu yeeraya?". Alle aya markaa aayadan soo dajiyey.
Muddo ka dibna wuxuu Rasuulku SCW yiri "Rabbiyow qowmkayga u dhaaf waxba ma ogee".
Gaaladii qureysheed waxay aad ugu dadaaleen maalinkaas in ay Rasuulka SCW dilaan, wax ay la hareen oo dagaal ahana ma jirin, si kastana way u dagaallameen, hub kasta oo ay heli kareenna way ku tuureen Rasuulka SCW sida seef, waran, fallaar, dhagax, iwm, laakiin Alle dile ayaa dhinta, waxaa Alle Rasuulkiisa SCW ku ilaaliyey 9kii nin oo toddobo ku shaahiiddey. Labadii nin ee soo hartay, Daxa iyo Sacad, oo ahaa niman aad dagaalka iyo shiishkaba ugu dheereeya waxa ay u beerdhigeen ciidan tiro badan oo doonayey in ay Nabiga SCW dilaan. Waxay labadaa nin isu dhegayeen ama ka celinayeen nabar kasta oo Rasuulka SCW ku socda ilaa ay Dalxa gacantiisii ka qallashay siduu nabar walba ugu dhigayey. Waxaa Dalxa ku dhacay dhowr iyo soddon nabar. Sidoo kale Tarmadi waxa uu wariyay in Rasuulku SCW isagoo Dalxa ka warramaya uu yiri "qofkii eegaya shahiid dhulka korkiisa ku socda, ha eego Dalxa binu Cubeydillaah". Abuubakarna markuu xusuusto maalinkaa Uxud wuxuu oran jirey "maalinkaas oo dhan waxaa iska lahaa Dalxa". Rasuulku SCW isagoo guubaabinaya Sacad wuxuu yiri "Sacadow gan, aabbahay iyo hooyaday ha lagugu furtee".
Allaah wuxuu soo dejiyey nasrigiisii, waxayna Bukhaari iyo Muslim weriyeen in Sacad yiri "Waxa aan arkay maalinkii Uxud labo nin (malag) oo difaacaya Rasuulkii Alle SCW, waxayna qabeen dhar cad cad, waxayna ahaayeen dagaalyahanno aanan hore iyo gadaal midna u arag". Riwaayad kale waxay sheegtay in ay ahaayeen Jibriil iyo Makaa'iil. Waxaa sidoo kale nasrigii Allaah kamid ahaa in Alle uu ku dajiyay Rasuulka iyo asxaabta daganaansho iyo xasilooni, kana saaray quluubtooda baqdintii ilaa ay mararka qaarkood ka lulmoonayeen, wuxuuna Bukhaari ka wariyay abuu Dalxa Al-Ansaari in uu yiri "waxaan kamid ahaa kuwii ay lulmadu qabatay maalinkii Uxud ilaa ay marar seeftaydii gacantayda ka dhacday". Allena isagoo arrinkaas tilmaamaya waxa uu qur'aankiisa ku yiri:
Muddo yar ka dib asxaabtii qaar ka mid ah waxay arkeen Rasuulka SCW, markaas ayay hal mar ku soo firxadeen. Qofkii u horreeyey oo u yimaada wuxuu ahaa Abuubakar sidiiq. Ibnu Xibbaan wuxuu saxiixiisa ku weriyey in Caa'isha tiri "Abuubakar wuxuu yiri "maalinkii Uxud markii ay dadkii (muslimiintii) oo dhan yaaceen, qofkii ugu horreeyey oo Nabiga SCW u soo laabtay ayaan ahaa, markaas ayaan arkay nin hortiisa ka dagaallamaya oo difaacaya, markaas ayaa iri "aabbahay iyo hooyaday ha lagugu furtee noqo (ahow) Dalxa", waxaa markaa iga daba yimid Abuu Cubeyda Ibnu-Jarraax, markii aan Nabiga SCW u tagnayna waaba Dalxa oo Nabiga SCW hortiisa ku dhacay, markaas ayaa Nabiga SCW yiri "qaada walaalkiin way u waajibtaye (janno)". Waxaa damcay in aan Nabiga SCW ka siibo birihii madaxa ka galay, Abuu Cubeyda ayaa markaa yiri "Ilaah baan kugu dhaarshaye maad ii deysid Abuubakar", markaas ayaan u daayey. Ilkihiisii ayuuu intuu ku qabtay soo dhiraandhiriryey si aysan Nabiga SCW u xanuujin. Markuu banaanka birihii u soo bixiyeyna foolkiisii ayaa soo raacay. Waxaan damcay markaa in aan tii (birtii) kale ka soo bixiyo Nabiga SCW, markaas ayuu yiri "Ilaah baan kugu dhaarshaye Abuubakar maad ii deysid". Ka dib sidii oo kale ayuu u dhiraandhiriyey, markuu soo saarayna foolkiisii kale ayaa soo raacay. Dabadeed waxaan u tagnay Dalxa si aan u daweyno isagoo ay ku taallo dhowr iyo toban seefood".
Intaa ka dib asxaabtii ayaa meeshii ku soo ururtay, gaaladiina waa ka soo ururtay, aad ayeyna msulimiintii ciriiri u geliyeen ilaa uu Rasuulku SCW ku dhacay bohol uu Abuu Caamir Al-faasiq qoday, oo uu lowga ka murgacday, waana laga soo bixiyey Rasuulka SCW bohoshii. Sidoo kale Rasuulka SCW fallaaruhu dhinac walba ayey uga imaanayeen, Allaahna dhinac ayuu ka marinayey, waana ka indho saabay in badan oo gaalada ka mid ahayd sida Cabdullaahi ibnu Shibaab oo oranyey "i tusiya Maxammed SCW, badbaado uma sugnaane" isaga oo agtiisa maraya oo hadba dhinac u dhaafaya. Ninka la yiraahdo Safwaan binu Umaya sidoo kale wuxuu yiri "Ilaah baan ku dhaartaye ma aan arag (Nabiga SCW), waxaanna ku dhaaranayaa in uu mamnuuc naga yahay, annaga oo afar nin ah ayaannu ku soo ballannay in aan dilno, mana aannaan gaarin".
Sidoo kale Cabdirahmaan ibnu Cawf waxaa ku dhacay maalinkaas labaatan nabar ama in ka badan. Maalik binu Sinaan, oo ahaa Abii Saciidul-khudri aabbihiis, ayaa isna maaalinkaa wacdaro muujiyey. Wuxuu soo nuugay dhiiggii fariistay wejigii Rasuulka SCW ee nabarku ku dhacay, Rasuulkuna SCW wuxuu yiri "iska tuf" hase yeeshee wuxuu yiri "Ilaah baan ku dhaartaye weligey tufi maayo". Ka dib dagaalkii buu hore u sii galay, Rasuulkuna SCW wuxuu yiri "qofkii doonaya in uu fiirsho nin ehlu-Janna ah ha fiirsho ninkaas". Dabadeed Maalik goobtii ayuu ku shahiiday. Sidoo kale Qataada ibnu Mucmaan isha ayaa nabar uga dhacay markaasuu Rasuulka SCW u yimid Rasuulkuna gacanta ayuu ka mariyay, wayna u raysatay.
Waxaa iyaguna dagaalka qayb wayn ka qaatay qaar ka mid ahaa gabdhihii muslimaatka oo gadaal ka yimid, sida gabadhii la oran jirey Ummu Cammaara (Nusayba bintu Kacab) oo u banbaxday ninkii Rasuulka SCW seefaha ku dhuftay, Ibnu Qum'a, waxayna ku garaacday dhowr seefood laakiin dhaawac weyn ma gaarin maxaa yeelay labo canbuur bireed ayuu iska dul qabay, isaguna hal seef ayuu qoorta uga dhuftay, ka dibna Ummu Cammaara way si dagaallantay waxaana korkeeda ku dhacay labo iyo toban nabar.
Ninkii ahaa Muscab ibnu Cumeyr wuxuu waday calankii muslimiinta, wuxuuna maalinkaas dagaallamay dagaal aad u xeel dheer, ilaa bilowgii dagaalkana calanka muslimiintu gacata ayuu ugu jirey, wuxuuna ka mid ahaa raggii ugu horreeyey ee Rasuulka SCW ku soo laabtay, ka dibna qayb weyn ka qaatay difaaciddii Rasuulka SCW. Ugu dambeyntii waxaa Muscab laga gooyey gacantii midig ee uu calanka ku waday, markaas ayuu gacantii bidix ku qabsaday oo sii dagaallamay ilaa gacantii bidixna laga gooyey. Ka dib wuxuu calankii ku qabsaday xabadka iyo qoorta ilaa uu aakhirkii halkaas ku shahiiday oo waxaa dilay Ibnu Qam'a. Markii uu diley ayuu wuxuu u maleeyey Rasuulkii SCW, markaas ayuu gaaladii ku dhex dhacay oo qeyliyey yirina "Maxammed waan diley", warkaa beenta ah ayaa ku dhex faafay gaaladii iyo muslimiintii kale ee aan Rasuulka SCW la joogin. Gaaladii markii ay hadalkaas maqleen way farxeen iyaga oo u malaynaya in ay Nabigii SCW dileen oo ay u jeeddadoodii gaareen. Markii Muscab la diley wuxuu Rasuulku SCW calankii muslimiinta u dhiibey Cali binu Abii-dhaalib. Cali aad ayuu u dagaallamay isaga iyo asxaabtii kale ee Rasuulka SCW agtiisa joogtey ilaa ay markii dambe Rasuulka SCW iyo asxaabtiisii jid banneysteen.
Kacab binu Maalik oo asxaabta ka mid ahaa, uuna gaaray warkii beenta ahaa, ayaa Rasuulkii SCW arkay, markaas ayuu aad u dhawaaqay oo yiri "muslimiineey bishaareysta, waa kan Rasuulkii Allee SCW". Rasuulka SCW ayaa markaa u tilmaamay in uu aamuso si aan gaaladu u ogaan meesha uu Rasuulku SCW joogo, hase yeeshee qayladii waxay gaartay gaaladii iyo muslimiintiiba, markaas ayaa in badan oo muslimiin ahi ku soo ururtay meeshii, gaaladiina waxa ay kordhiyeen weerarkoodii. Ninka la yiraahdo Cusmaan binu Cabdullaahi, oo ka mid ahaa fardooleyda gaalada, ayaa Rasuulka SCW ku soo baxay isaga oo leh "badbaado kuuma sugnaan", Rasuulkuna SCW waa la dagaallamay laakiin waxaa kaga hormaray oo ninkaa diley Xaarith binu Sumah. Waxaa isna soo orday ninka la yiraahdo Cabdullaahi binu Jaabir, oo isna fardooleydii gaalada ka mid ahaa, wuxuuna seef qoorta uga dhaawacay Xaarith. Muslimiintii ayaa markaa qaaday Xaarith oo dhaawac ah, ka dibna Abuu Dujaana ayaa si degdeg ah seef qoorta ugaga gooyey Cabdullaahi binu Jaabir.
Rasuulka SCW iyo asxaabtiisi waxay xoog ku jireen gaaladii waxayna fuuleen buurtii, waxaa markaa ka daba tegey Rasuulka SCW nin ciidanki gaalada ka mid ahaa oo la oran jirey Ubay ibnu khalaf, oo ka mid ahaa dadkii Rasuulka SCD ku dhibi jirey Makka, kuna yiri maalin "Maxammed SCW faras baan u naaxiyaa in aan kugu dilo", Rasuulkuna SCW wuxuu ugu jawaabay" anigaa ku dili doona haddii Alle idmo". Markuu Rasuulka SCW ka daba tegey ayuu yiri "meeyey Maxammed SCW magangal kuuma sugnaan". Rag asxaabta ka mid ah ayaa markaas yiri "Rasuulkii Allow nin aan u saarno", hase yeeshee Rasuulku SCW wuxuu yiri "iska dhaafa", isagaana leeb ku dhuftay. Ka dib Ubay ciidankii gaalada ayuuu ku laabtay isagoo dhaawac ah, markaas ayuu qureysh ku yiri "Maxammed baa i diley", waxay ku dheheen "waad fuleyowday", maxaa yeelay nabar weyni kuma oollin. Markaas ayuu yiri "markaan Makka joogney ayuu Maxammed i yiri "anigaa ayaa ku dili doona" wuuna i diley". Dabadeedna Ubay wuxuu dhintay markii uu laabtay ciidankii gaaladu isagoo aan Makka gaarin, waana ninkii keli ahaa ee Rasuulku SCW gacatiisa ku diley.
Rasuulka SCW iyo asxaabtiisu markii ay buurtii fuuleen, waxaa iyaguna buurtii dhinac ka soo fuulay ciidan qureysheed oo ay hoggaaminayaan Abuu Sufwaan iyo Khaalid, markaas ayaa Rasuulku SCW yiri "Allahayow kuwaas awlo uma ahaanin in ay naga kor maraan". Waxaa markaa la dagaallamay nimankaas Cumar binu Khadhaab iyo koox la jirta ilaa ay buurtii ka dejiyeen. Kaas ayuuna ahaa dagalkii u dambeeyey ee goobtii Uxud ka dhacay.
Dhinicii gabdhihii muslimaatka ahaa sidii aan soo sheegnayba qaar ka mid ahaa ayaa qayb libaax ka qaatay dagaalka waxayna badankoodii yimaaddeen markuu dagaalku dhammaaday. Qaarkood waxay biyaha soo waraabinayeen ayna daweynayeen dadkii dhawaca ahaa, sida Caa'isha, Umu Sulaym iyo Umu Sulaydh, qaarkoodna way dagaallamayeen sida gabadhii la oran jirey Ummu Ayman oo iyadoo Madiina joogta aragtay rag asxaabtii ka mid ah oo magaalada baqo ku soo galay, markaas ayey mid ka mid ah ku tiri "waad soo baqday, war i sii seeftaada", ka dibna waxay timid goobtii dagaalka, waxayna wax ka waraabinaysay dadkii dhaawaca ahaa. Dhammaadkii dagaalka waxaa Ummu Ayman leeb ku soo tuuray nin la oran jirey Xibbaan binu Curqa, markaas ayey dhacday (iyada oo dhaawaca ah), maradiina ka feydantay. Qosol ayuu markaas cadowgaas Alle la dhacay, Rasuulka SCW ayaa markaa Sacad binu Abii Waqaas leeb u dhiibay oo ku yiri "ku gan". Sacad ayaa leebki ku ganay oo dhuunta bartankeeda kala helay, markaas ayuu xabdka u dhacay cawradiina ka feydantay. Markaas ayaa Rasuulku SCW ku qoslay ilaa ay miciyihiisii ka muuqdeen, wuxuuna yiri "Sacad ayaa u gargaaray, Allaahna wuu aqbalay ducadiisii". Waxaa halkaan iyo meelo kaleba laga qaatay in gabdhaha muslimaatka ahi ka qayb qaadan karaan jihaadka haddii balad islaam lagu soo duulo oo xaaladu ay khatar gaadho, wuxuuna jihaadku ku noqonayaa waajib sida raga, sidoo kale gabadha muslimada ahi way is difaacaysaa haddii nafteeda loogu yimaado.
Ka dib waxaa Rasuulka SCW dhiiggii ka dhaqay gabadhiisii Faadumo, waxaana biyaha ugu shushubayey Cali, Faadumo markii ay aragtay in biyuhu aysan dhiigga joojineyn ayey soo qaadatay caw yar, oo inta ay gubtay meeshii saartay ilaa uu dhiiggii joogsaday. Maxammed binu Maslamana wuxuu Rasuulka SCW u keenay biyo macaan si uu u cabbo. Ka dib Rasuulku SCW wuxuu asxaabtii tujiyey salaaddii duhur isaga oo fadhiya. [Qaybtii 5aad]